I-Raw Androsterone powder (53-41-8) hplc =98% | AAraw steroid powder
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Androsterone powder
SKU: 53-41-8. Udidi: Anabolics Steroids
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Androsterone powder (53-41-8), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Androsterone powder i-androgenic steroid eyenzeka ngokubanzi kuyo yonke imvelo, ngakumbi kwizilwanyana, kodwa nakwizityalo ezininzi, kubandakanywa nemithi yeminatha kunye namakhowe e-truffle. Ingumngqambela we testosterone, kodwa ngokwawo, ithathaka ngakumbi kune-testosterone egazini. Ngenxa yoko, i-Androsterone inokubaluleka ngakumbi kumzimba womzimba xa kuthathwa kwi-stack kunye nezinye i-androgenic-anabolic steroids.
Androsterone powder ividiyo
I-Raw Androsterone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Androsterone powder
I-molecular Formula: C19H30O2
Isisindo somzimba: 290.44
Ukusetyenziswa kwe-Androsterone powder kwimijikelezo ye-steroids
5A-androstan-3α-ol-17-enye. I-Androsterone powder (i-CAS 53-41-8)
Ukusetyenziswa kwe-Raw Androsterone powder
I-Androsterone powder ingathathwa ngokutshintshela nge-patch okanye ngomlomo nge-capsule. Xa uhamba ngebhayisikili, u-Androsterone powder kufuneka athathwe ngomlomo kwi-400mg ukuya kwi-600mg idayithi zansuku zonke okanye i-transdermally kwi-200mg ukuya kwi-300mg idayithi zansuku zonke. Xa ubeka i-Androsterone powder, i-doses kufuneka ihliswe yi-200mg ukuya ku-400mg, kuxhomekeke kwisixa steroids kwisigxina. Ngomjikelo wokuqala, kunconywa ukuba uthathe umthamo ophantsi kunokwenzeka ukuba usetyenziswe kwi-hormone e-androgenic eyandayo emzimbeni. Kwinqanaba lesibini okanye lesithathu, umthamo unganyuswa kwiimbaleki ezinokunyamezela i-steroid.
Isilumkiso kwi-Raw Androsterone powder (i-CAS 53-41-8)
Ngenxa yobungqina be-androgenic yale nkomfa, abo baxhomekeke kwimibala yesimo somntu kufuneka bagweme le ngqungquthela nje ngokuba ukulahleka kweenwele ezincinci kubangela umngcipheko kulabo abanomdla.
I-Androsterone powder ecocekileyo iprohormone exhaphakileyo kunye neenzuzo ezininzi ekusebenziseni kwayo. I-Androsterone i-powder eluhlaza yayifakwe kwi-original version ye-LG Sciences T-911 yokuphucula ukuqala komsebenzi okubonelelayo, kwaye yaqukwa kwakhona kwiqondo elingaphantsi kwe-LG-Sciences Formadrol Extreme kwiipropati zayo zokulwa ne-estrogen. Okwangoku, zombini i-epiAndrosterone ipowder eluhlaza kunye ne-Androsterone ipowder eluhlaza iyatholakala kwi-prohormone Test Epi-1.
Indlela yokuthenga i-Androsterone powder (i-CAS 53-41-8) esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubungqina 98% I-Androsterone i-powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilebhu zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.